Budata Malwarebytes Anti-Malware maka Windows
Budata Malwarebytes Anti-Malware
Free Budata maka Windows (60.10 MB)
Budata Malwarebytes Anti-Malware,
Ọtụtụ ngwanrọ dị iche iche na-eyi egwu kọmputa anyị egwu, dịka nje, ikpuru, spyware, yana malware, nwere ike ọ nwute ibute nsonaazụ dị egwu dị ka ọnwụ data, ihe onwunwe na omume omume, ọ na-esiri ndị ọrụ ike iguzogide ha niile site na iji naanị otu antivirus.
Nihi na mgbe mmemme antivirus na-enwekarị ihe ịga nke ọma nịchọpụta ihe egwu, ha ezughi oke megide ihe mgbagwoju anya na nkọwa zuru ezu. Malwarebytes Anti-Malware programmụ so na otu ngwa na ogo dị mma nke na-anwa ichebe gị pụọ na egwu dị otú ahụ ma mepụta mgbidi dị mma megide ngwanrọ malware. Ihe egwu ọ nwere ike ịnabata gụnyere trojans, rootkits, ikpuru, spyware na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịsị na ọ na-egbochi ma kpochapụ mgbakwunye-dị ka homepage na ogwe ngwaọrụ nke etinye na ihe nchọgharị weebụ dị ka govome.com, conduit, ask.com. Mgbe a nyochachara usoro ihe omume ahụ, usoro ihe omume ahụ na-eweta faịlụ nje na kọmputa gị ozugbo dị ka akụkọ, si otú a na-enye gị ohere ịme nhicha ịchọrọ.
Usoro nhicha ahụ dịkwa mkpụmkpụ ma na-ewe obere sekọnd, yabụ ị nwere ike tufuo ngwanrọ dị egwu na kọmputa gị nenweghị mbọ ọ bụla. Na Ntọala taabụ, enwere nhọrọ niile dị mkpa nke nwere ike imetụta atụmatụ ọrụ mmemme nke usoro ihe omume wee kọwaa ebe ịchọrọ ka enyocha gị. Gafere na-enweghị na-agbalị Malwarebytes Anti-Malware, otu nime ndị kasị dị irè malware iwepụ mmemme na ahịa.
Malwarebytes Anti-Malware Ụdịdị
Nha faịlụ: 60.10 MB